Zithini iiNqaku zikaGoogle zokuDlala, inkqubo yokufumana ityala | I-Androidsis
Sele siyazi into ekuthiwa ziiGoogle Play Points, inkqubo yemivuzo kwivenkile kaGoogle
Sele siyazi into ekuthiwa ziiGoogle Play Points okanye Amanqaku kuGoogle Play, inkqubo entsha kaG Okuya kukuvuza ngako konke ukuthengwa okwenzayo kwi-app yakho, umdlalo wevidiyo kunye nenye ivenkile yomxholo.
Oko kukuthi, ukuba sele uphendule imibuzo kwimivuzo kaGoogle, uya kuba nenye indlela yokwenza yongeza ii-euro kwiakhawunti yakho ukuzisebenzisa kamva kule midlalo, iiapps kunye nee-micropayments ngaphakathi kwezicelo zakho ozithandayo; Kule meko singathetha ngePUBG kunye nezikhumba zayo.
1 Zithini iiNqaku zikaGoogle zokudlala?
2 Inkqubo yamanqaku kuGoogle Play
3 Siya kusebenza nini?
Zithini iiNqaku zikaGoogle zokudlala?
Ewe, kulula kakhulu, ngalo lonke ixesha uchitha i- $ 0,90 (ngalo mzuzu lifika kwilizwe lakho ngemali yakho) kumdlalo, usetyenziso okanye imicropayment, uyakufumana inqaku. La manqaku aqokelelweyo izakuvumela ukuba uzisebenzise kwii-micropayments okanye uziguqule Kwikhredithi yeGoogle Play. Eyona nto intle malunga nale nkqubo kukuba kokukhona uqhubela phambili, amanqanaba aphezulu anokufikelelwa ngembuyekezo enkulu nangakumbi.
Oko kukuthi, okukhona uchitha kwiVenkile yeGoogle yokuDlala, kokukhona uya kufumana amanqaku, kwaye ke, unokuguqula amanqaku afunyenwe kokubini kwiGoogle Play ngetyala nakukuthenga ngaphakathi nohlelo okanye kwimicropayments. Enye indlela yoku ukwazi ukwenza zonke iintlobo zokuthenga kwivenkile ye-Android ukulibala malunga nokuba sisebenzise eyethu ikhadi lokutsala.
Inkqubo yamanqaku kuGoogle Play
Le yile Uluhlu lwenqanaba lendawo apho unokufumana umbono wenqanaba onokufikelela kulo:
Inqanaba lobhedu: ukuya kuthi ga kumanqaku angama-249:
Inqaku eli-1 lifumene i-0,90 yeedola echithwe.
Inqanaba lesilivere: ukusuka kumanqaku angama-250 ukuya kuma-999:
Amanqaku ayi-1,25 kuyo yonke i-0,90 yeedola echithwe.
$ 2,70 yee-micropayments ngaphakathi kweapp okanye umdlalo.
$ 0,90 yokuqeshisa imovie.
Inqanaba legolide: ukusuka kumanqaku angama-1.000 ukuya kuma-3.999:
Amanqaku ayi-1,5 afunyenwe kuyo yonke i-0,90 yeedola echithwe.
$ 2,70 njengetyala lokuthenga ngaphakathi nohlelo.
$ 4,50 yokuchitha kwiincwadi zeencwadi.
Ukuqeshiswa kweefilimu ezimbini ezinexabiso le- $ 0,90.
Inqanaba lePlatinam: Amanqaku angama-4.000 ukuya kwi-14.999:
Amanqaku ayi-1,75 afunyenwe kuyo yonke i-0,90 yeedola echithwe.
$ 2,70 ngetyala kwimicropayments.
Iikhredithi ze-4 ze-ebook zixabise kwi- $ 4,50 inye.
Iikhredithi ezi-4 zokurenta zixabisa i- $ 0,90 inye.
Inqanaba ledayimane: amanqaku angaphezu kwe-15.000:
Amanqaku ayi-2 afunyenwe kuyo yonke i-0,90 yeedola echithwe.
Iikhredithi ezi-2 ezixabise i- $ 2,70 yee-micropayments ngaphakathi kweapp.
Iikhredithi ezi-6 ezixabise i- $ 4,50 yee-ebook.
I-5 yokuqeshisa imovie nganye enexabiso le- $ 0,90.
Njengokuba ubona, Amanqaku amaninzi oye wawaqokelela, ukunikezelwa okungcono unokufumana. Nangona ukufumana amanqaku ali-100 kuya kufuneka sidlule kwii-90 zeerandi ezichithwe. Yonke into iyakuba kukuba sisebenzise imali eqokelelwe kwiakhawunti yethu kwaye siyifumene kwiGoogle Rewards, kuba ukuba ayifakwanga into yokuba siza kufuna amanqaku amaninzi ukuze sikwazi ukubuyisa into.
Siya kusebenza nini?
Okwangoku Amanqaku kuGoogle Play ayafumaneka ngoku eJapan isungulwe namhlanje kwelo lizwe. Xa ifumaneka kwilizwe lakho, ungaya kwicandelo lehambhega elibizwa ngokuba yi "Play Points". Ukusuka apho singaqala ukulawula onke amanqaku, sazi ukuba zingaphi ezisele, zingaphi izinto esiphumeleleyo kunye nawo onke amathuba esiya kuba nawo ezandleni zethu xa sifikelela kwinqanaba elinye okanye elinye.
Siza kubona ethubeni ukuba singakwazi ngokwenene ukuxhamla kolu hlobo lwekhredithi. Kucacile ukuba nabani na owenza umdlalo omkhulu kwii -apps zabo abazithandayo kunye nemidlalo yevidiyo uya kuxhamla. Kwaye ngaphezulu, ukuba uyayazi indlela yokuba nomonde oyimfuneko ukuze uphakame kwaye ube unetyala eliqokelelweyo. UGoogle unomdla kula manani maninzi, anje ngala manqaku angama-4.000 wePlatinam, hlala evenkileni yawo, kuba oko kuthetha ukuba uchithe malunga ne-3.500-4.000 yeedola.
Siza kubona ukuba inkqubo yamanqaku ihlala ifana xa ifika kula macandelo kwaye singathatha inxaxheba kwiiNqaku zikaGoogle zokuDlala, inkqubo apho siza kufumana khona imivuzo yokufumana ii-micropayments, umxholo, ii -apps kunye nemidlalo yevidiyo, yonke into esiyonwabelayo kwifowuni yethu.
Ewe, ulibale malunga nokuzisebenzisa kwiFornite, ukususela ngelixa uphume kwiVenkile yokuDlala, kuba nzima kuwe ukuba usebenzise ikhredithi okanye ikhadi lakho ukufumana amanqaku kwiGoogle Play Points.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Sele siyazi into ekuthiwa ziiGoogle Play Points, inkqubo yemivuzo kwivenkile kaGoogle
Kwaye ukuba ufaka isicelo esithengiswayo esixabisa i-1,30 kwaye ngoku simahla ixesha elilinganiselweyo, ngaba baya kukunika amanqaku?
Hayi kuphela xa usebenzisa ityala onalo kwiakhawunti yakho okanye usebenzisa ikhadi okanye enye indlela yokuhlawula.
Oku kunye nesicelo sokubuyiselwa imali esingakhange sisebenze ixesha elide, mhlawumbi sinokuvelisa ibhalansi ephunyeziweyo kunye nembuyekezo.
I-Infinite Knights yi-RPG ene-based-based combat yokulwa ixesha elifanelekileyo